Periasc Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Aosta, i-Italy | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Periasc
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Periasc
Izwe elinethezekile elinamagumbi amathathu eliyisicaba nengadi yomphakathi
Indawo yokuhlala iyifulethi elihle futhi elinethezekile lamagumbi amathathu emzaneni wase-Valdostano; itholakala amakhilomitha ambalwa ukusuka e-Chamoluc endaweni ethulile futhi iphelele ngamasevisi ayisisekelo afana nesiteshi sebhasi, isiteshi segesi, isitolo sokudla, isitolo sokudla kanye nesitolo segwayi. Ukuphonsa itshe kusuka enkundleni yokudlala, ithrekhi yezwe elinqamulayo kanye nemizila elula. Indlu inamakamelo angu-2, indlu yokugezela engu-1, ikhishi elilodwa elinegumbi lokuphumula, i-balcony engu-1 ebheke e-Monte Rosa nengadi echazwe kahle engu-1. Kudingeka imali eyengeziwe engu- € 20 ubusuku ngabunye yesivakashi sesihlanu.
Amasevisi athandwayo ase- Periasc ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Periasc
Casa con giardino vicina a Champoluc 3 camere WiFi